के तपाइ तनावमा हुन्नुहुन्छ ? यस्ता छन् तनावबाट मुक्त हुने उपायहरू - ज्ञानविज्ञान
तपाईं आफ्नो कार्यालयमा तनावमा हुनुभयो भने राति धेर खाने वा जंक फूड खाने गर्न थाल्नुहुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्छ ।
एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार राति राम्रो सुत्दा कार्यालयमा तनावबाट बच्न तथा बेलुका अस्वस्थ खाना खानका लागि प्रेरित नहुन मद्दत पुग्छ ।
अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानका एसोसिएट प्रोफेसर तथा अनुसन्धानकी सहलेखिका चू सीयाङ चाङले भनिन्, ‘जुन कर्मचारीलाई कार्यालयमा दिनभरि तनावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, उनीहरू नकारात्मक भावनाहरूलाई भान्सामा लिएर आउँछन् । अनि उनीहरू सामान्यभन्दा बढी भोजन गर्छन् र जंक फूड खाइदिन्छन् ।’
अनुसन्धानको निष्कर्ष जर्नल अफ एप्लाइड साइकोलोजीमा प्रकाशित भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा २३५ जना कर्मचारीमाथि दुई फरक फरक अध्ययन गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले दिनदिनै दिमाग खियाउने भारी काम गर्नुपर्ने हुनाले तनाव खेप्नुपर्छ ।
अर्को अध्ययन चाहिँ कल सेन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि गरिएको थियो । उनीहरूले अनेकथरी ग्राहकसँग कुराकानी गर्दा तनाव खेप्नुपर्छ ।
अमेरिकाको इलिनोइ विश्वविद्यालयमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनका सहलेखक इहाओ लिउले भने, ‘दुवै अध्ययनमा कार्यालयमा तनावपूर्ण काम गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूले देखाउने नकारात्मक व्यवहार नै उनीहरूको बेलुकीको अस्वस्थकर भोजनमा रुचिसँग जोडिएको छ ।’
लिउले थपे, ‘समय समयमा भोजन गर्नु कुनै व्यक्तिको नकारात्मक व्यवहारलाई शान्त र नियन्त्रित गर्नका लागि उपयोगी हुन्छ किनकि खासमा व्यक्ति अनुकूल भावनालाई स्वीकार गर्न मन पराउँछन् ।’
तनाव कम कसरी गर्ने ? यस्तो छ सरल विधि
भनिन्छ, जन्मनसाथ हामीलाई तनावले घेरा हाल्छ । अर्थात यो संसारमा कोहि छैन, तनावरहित ।
तनाव सबैलाई हुन्छ । बच्चा, किशोर, युवा, वयस्क, बृद्धा सबैलाई । धनी, गरिब । दुर्गमका, सुगमका । शिक्षित, अशिक्षित ।
हामीले दैनिक रुपमा अंकुरित भोजन, हरियो सागसब्जी, मौसम अनुसारको तरकारी तथा फलफुलको सेवन गरेमा हामी स्वास्थ्य रहन सक्छौं । हामीले खाने गरेको तोरीको साग बजारमा सहजै रुपमा पाइनुका साथै यसलाई आफ्नै घरको बारीमा उमार्न सकिन्छ ।
यो तोरीको सागमा धेरै मात्रामा खनिज र भिटामिन पाइने ह्यदा थोरै मात्र क्यालोरी हुने गर्छ । भिटामिन, खनिज, डाइटयुक्त फाइबर तथा प्रोटिनको मिश्रणले भएकाले यो सागको नियमित सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउने गर्छ । यसले हाम्रो मानसिक क्षमतामा पनि बिकाश गर्न मद्दत गर्छ ।
नियमित रुपमा तोरीको साग खाँदा हाम्रो शरिरमा पोषणको मात्रा बढ्नुका साथै उच्च मात्रामा फाइबरयुक्त पोषणले हाम्रो पाचन प्रकियालाई व्यवस्थापन गर्दै र तौल घटाउन पनि मद्धत गर्छ । हामीले खाएको खानालाई अपच हुन दिदैन र साथै यसले पेट सम्बन्धि विभिन्न रोग हटाउने गर्छ ।
यसमा आइरन, भिटामिन ुएु र भिटामिनु इु भिटामिन ुसीु पनि पाइन्छ । सूर्तीमा हुने क्यान्सरजन्य तत्वले भिटामिन ुएुको कमि गराउछ । तोरीको हरियो सागमा पाइने एन्टिअक्सिडियन्ट र सल्फरले हाम्रो शरीरको कोषलाई क्षति गर्ने अणुहरुलाई नष्ट गरेर मदिरा, धुम्रपान र ड्रग्सको कुलतको बिष हटाउने गर्छ ।
हाम्रो शरीरको विषालु पदार्थलाई हटाइ क्यान्सरको सम्भावना कम गराउनुका साथै हामीलाई हुने अन्य दिर्घकालिन रोगलाई निको बनाउन मद्धत पनि गर्छ । यसले ब्लाडर, कोलोन, स्तन, फोक्सो, प्रोस्ट्रेट र अन्डासयको क्यान्सरबाट हामीलाई जोगाउने गर्छ ।
यसले हाम्रो शरीरको खराब कोलेस्ट्रोलको तह घटाएर दम तथा अन्य स्वासप्रस्वास सम्बन्धि र मुटु सम्बन्धि विभिन्न रोगमा फाइदा पुर्याउछ । क्याल्सियम र पोटासियमको स्रोत भएको यो सागले हड्डीसँग सम्बन्धित सबै समस्याबाट मुक्त गराउनुका साथै हाम्रो आँखालाई तेजिलो बनाउछ ।
Don't Miss it खाना खाने समय कति बेला उत्तम हाे ? जान्नुहाेस्
Up Next मदर टेरेसाको केहि जीवन उपयोगी भनाइहरु